Maaskarada Wejiga Caafimaadka ee La Tuuri Karo, Fayraska Tuubada, Tube Sampling - Limeng
Shirkadda Daawada Shandong Limeng waxaa la aasaasay 1993, hadda waxay leedahay daawada casriga ee Shiinaha, cuntada daryeelka caafimaadka, aqoon isweydaarsiga wax soo saarka qurxinta, qalabka caafimaadka iyo aqoon isweydaarsiga, aqoon isweydaarsiga sahayda jeermiska iyo aqoon isweydaarsiga soo saarista daawooyinka Shiinaha, dhammaantoodna waa ay gudbeen. shahaadada aqoon isweydaarsiga boqol-kunka ah. Shirkaddu had iyo jeer waxay u hoggaansameysaa fikradda horumarinta hanuuninta tiknoolajiyada sare, iyo iskaashiga cilmi-baarista warshadaha-jaamacadda. Waxay leedahay hal koox R & D xirfadle ah, laf dhabar farsamo iyo farsamo yaqaanno. Shirkaddu waxay ku dadaaleysaa inay horumariso istiraatiijiyadda astaanta, calaamadda "Limeng" waxaa lagu abaalmariyay inay tahay Astaanta Caanka ee Dawladda Hoose ee Jinan sanadkii 2012.
Nala soo xiriir si aad u hesho alaabooyin badan
Shandong Limeng Daawada Co., Ltd.
Shirkaddu had iyo jeer waxay u hoggaansameysaa fikradda horumarinta hanuuninta tiknoolajiyada sare, iyo iskaashiga cilmi-baarista warshadaha-jaamacadda.
Macluumaadka R & D
Injineer u qalma R&D ayaa halkaa u jooga adeegaaga la tashiga waxaanan isku dayi doonaa sida ugu fiican ee aan u kulano shuruudahaaga
Xalalkayagu waxay leeyihiin heerar aqoonsi qaran oo khibrad leh, alaab tayo sare leh, qiimo la awoodi karo ...
Xilligan shirkaddu waxay leedahay qalab caafimaad iyo aqoon isweydaarsi ka badan 2,000 oo mitir murabac ah, aqoon isweydaarsiga cuntada ee daryeelka caafimaadka ee 10,000 mitir murabac, iyo foomamka qiyaasta waxaa ka mid ah kaabsulka, kiniiniga, granules iyo budada iwm.
102020 / Oktoobar
Shandong Limeng ayaa lagu qabtay xafladaha xafladda ee laanta cusub ee warshadda
Bishii Maarso 6, 2019, Shandong Limeng ayaa lagu qabtay xafladda xafladda laanta cusub ee warshadda. Wada-hawlgalayaasha Limeng ayaa sidoo kale ka qaybgalay munaasabadda. Si loo ballaariyo wax soo saarka shirkadda loona kobciyo mashaariic dheeri ah, Limeng Pharm waxay ku maalgelinaysaa 1.2 milyan ginni si ay u iibsato 10 hektar oo dhul ah. Laanta cusub ee wil wil ...
On July 28, 2020, waaxda ay khuseyso ee Maamulka Cuntada iyo Dawada ee Shandong ayaa u oggolaatay qeybta baaritaanka qeybta saddexaad, SGS, inay dib u eegis ku sameysay nidaamka maareynta tayada dawada ee Limeng, oo ku saleysan nidaamka maareynta HACCP ee caalamiga ah. Mashaariicda kaabayaasha cuntada, dai ...
La dagaallanka aafada si wadajir ah
Maalin ka hor Shiineeska Dhaqanka Gu'ga, COVID-19 wuxuu ku faafay si xoog leh. Cudurkaan faafa ee qof walba saameeyey wuxuu dhibaato weyn u geystey malaayiin dad ah. Tan iyo markii uu dillaacay, Shandong Limeng Pharmaceutical Co., Ltd. waxay sameyneysay dadaal kasta oo ay ku soo saari laheyd isla markaana ku barakeysay ...